သဲပေါက်ကွဲမှုများအတွက် Downflow ဖုန်စုဆောင်း China Manufacturer
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: ဒေါင်လိုက်ကျည်တောင့်ကောက်ခံရေး,Bay အထည်အလိပ်ဖုန်ကောက်ခံရေး,သဲပေါက်ကွဲမှုထိရောက်သောဖုန်စုဆောင်းစက်
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဖုန်စုပ်စက် > ဆန့်ကျင် - Blower ပိတ်စအိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး > သဲပေါက်ကွဲမှုများအတွက် Downflow ဖုန်စုဆောင်း
သဲပေါက်ကွဲမှုများအတွက် Downflow ဖုန်စုဆောင်း
 သဲပေါက်ကွဲမှုများအတွက် Downflow ဖုန်စုဆောင်း
1. ဒေါင်လိုက်တပ်ဆင် သည့်အရာတစ်ခုဖြင့်စစ်ထုတ်သည့်ပစ္စည်း၏ အသုံးပြုမှု နှုန်း သည် ၂၅% ပိုမိုမြင့်မား ပြီးလုပ်ငန်းသက်တမ်းသည်ကြာရှည်လိမ့်မည်။
2. HEPA သို့မဟုတ် ULPA filter ကို။ ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားမှုနှုန်းသည် ၉၉.၉% ကျော်ရှိပြီး0.3μ ultra - fine dustes ဖြစ်သည်။
3.M odular ဒီဇိုင်း၊ လုပ်ကွက်ပုံစံတပ်ဆင်ခြင်း၊ အလွန်အဆင်ပြေစွာတပ်ဆင်ခြင်း။
4. Q235 သို့မဟုတ် SUS သံမဏိကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: ဒေါင်လိုက်ကျည်တောင့်ကောက်ခံရေး , Bay အထည်အလိပ်ဖုန်ကောက်ခံရေး , သဲပေါက်ကွဲမှုထိရောက်သောဖုန်စုဆောင်းစက် , anti-လေညင်းတိုက်ခတ် Bag ဖုန်ကောက်ခံရေး , ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , သတ္တုအရည်ကျိုဖုန်ကောက်ခံရေး , သစ်သားစက်မှုစက်မှုဖုန်ကောက်ခံရေး , anti-လေညင်းတိုက်ခတ် Bag ကောက်ခံရေး